I-China 1325 ezine spindle nge-line eqondile ye-ATC fektri kanye nabakhiqizi | JCUT
1. Ukusika, ukubeka phansi, ukubhoboza, ukubaza (imodeli elula). Lezi zinqubo ezine zingasetshenziselwa ukusika kwamakhabhine kanye nokwakhiwa komnyango wekhabethe. Isebenzisa uhlelo olusha lokushintsha amathuluzi oluzenzakalelayo, uhlelo luzenza ngokuzenzakalelayo izidingo zokucubungula ngaphandle kokungenelela kwencwadi. Ama-spindles amaningi asebenza ngasikhathi sinye, enza ngcono ukusebenza kahle kokusebenza.
2. Ihlanganiswe netafula le-vacorpio ye-vacuum, iphampu ye-vacuum ingasebenza ngokuphelele ngezinto zokwenziwa ezinobukhulu obuhlukahlukene, futhi umphumela we-adsorption muhle. Asikho isidingo sokulungisa ngesandla ipuleti, elithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi.
3. Ifakwe nge-servo motor, i-high-precision gear kanye ne-rack drive engeniswa ngaphakathi, okwenza umshini ugijime uqinile, ngomsindo ophansi, isivinini esisheshayo nokunemba okuphezulu kokuma. Futhi i-othomathikhi yohlelo lokuthambisa ingagcoba ngokuzenzakalela futhi igcobe ngokusho kwesikhathi ukuze kuqinisekiswe ukuthambisa kwesitimela sokuqondisa isilayidi futhi sandise impilo yenkonzo yomshini.
4. Ithuluzi lomshini lamukela uhlaka olukhulu lwe-gantry lokwelashwa okushisa okuphezulu lokushisa ukuze uqinisekise ukuguquguquka okuncane, ukuqina okuhle, amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, nokusebenzisa isikhathi eside ngaphandle kokudidiyelwa, ukunyakaza kwe-gantry, ukujikijela okubalulekile kwe-gantry, okuqinile nokuqina, okude. ukusetshenziswa kwethemu ngaphandle kwe-deformation.
5. Kusetshenziswa uhlelo oluzenzakalelayo lokushintsha amathuluzi, uhlelo lusebenza ngokuzenzakalelayo ngezidingo zokucubungula ngaphandle kokungenelela. Ama-spindles amaningi asebenza ngasikhathi sinye, enza ngcono ukusebenza kahle kokusebenza.
6. Ukusebenzisa imemori ecishiwe (Power-off memory) ukuqinisekisa ukuthi ukucubungula kungaqhubeka lapho kwenzeka ingozi (ummese ophukile) noma ngakusasa.
Isikhungo sokushintsha amathuluzi esisetshenziswa ngaphakathi silungele izimboni ezenziwe ngokhuni ezifana nefenisha yephaneli, iminyango yamakhabhinethi, ifenisha yehhovisi, ifenisha yangokwezifiso, kanye nomkhakha wezicabha. Amapuleti asebenzisekayo: amapuleti amaningi angqimba, ibhodi yezinhlayiya, amabhodi emvelo, amabhodi we-density board, amabhodi we-wave namanye amabhodi ahlukahlukene. Lo mshini ungasetshenziswa ezimbonini ezahlukahlukene, njengafenisha yephaneli, amawadi wekhabethe, ifenisha yasehhovisi, ifenisha yangokwezifiso, amadeski ekhompyutha, izikhulumi zokhuni, izinto zokhuni zasekhishini, njll.
I-Longteng isizukulwane sesithathu i-R10 eqondile i-ATC + i-Heads ezine cnc router
I-1220 * 2440 * 200mm （ubude bokweseka 2800 ukwenza ngokwezifiso）
Uhlelo lweTaiwan LNC
Esedlule: I-ATC izinkuni cnc 1325
Olandelayo: I-Wood router ye-atc